Booliska Swedan oo amakaagay iyo 80 jir ay qabteen oo isu badalay 26 jir: SAWIRRO
Booliska dalkaasi Swedan ayaa gacanka ku dhigay nin 26 jir ah oo isu soo muuqaal ekeysiiyay oday 80 jir kaddib markii ay gaari ku ceyrsadeen gaari uu watay. Gaariga “odaygan” ayaa waxa ay boolisku ka heleen laba bastooladood iyo qori. Waxa ay boolisku sheegeen in uu qorsheynayay dil aargudasho ah.
by calanka —	October 31, 2016 —	Jacbur, Sawirro
Baby 2-jir ah oo laga bad-baadiyay dariishad uu kasoo raaracay: VIDEO
Nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Liang Lei ayaa waxaa ay ishiisu qabatay wiil labo jir ah oo kasoo raaraca dabaqa shanaad sar ku taal galbeedka dalkaasi Shiinaya. Waxa uu ku guuleystay in uu bad-baadiyo.
by calanka —	October 31, 2016 —	Video
Gabar hooyadeed la guursanayay oo mar qura oohin qabsatay: VIDEO
Diogo Bolant (37-jir) oo ah ninka guursanayay hooyada gabadhan yar ayaa weydiistay gabadha in uu uu noqdo aabe taas oo dhalisay in gabadhani aahin jabsato islamarkaana ay isku duubto ninka hooyadeed guursanayay.
Todobo jir caalamka kaga yaabsatay qoob-ka-ciyaar: VIDEO
Gabar todobo jir Mareykan ah islamarkaana lagu magacaabo Jamiila ayaa habeen qura caan ku noqotay kaddib markii lasoo dhigay baraha bulshada iyada oo ciyaareysa.
by calanka —	October 30, 2016 —	Video
Dhul-boob lagu hayo Indian-ka Mareykanka: SAWIRRO
Iska-hor-imaad u dhexeeya booliska North-Dakota iyo dadka indianka ah ee ku nool halkaasi ayaa dhacay kaddib markii shirkadda “Dakota Access Pipeline” ay go`aansatay in ay dhuumo waaweyn oo shidaalka qaaday ay mariyo dhul ay leeyihiin dadka Indian-ka ah.
by calanka —	October 30, 2016 —	Sawirro
Magaalooyin laga saaray ISIS oo laga helay godad tuneello ah oo aan horay loo arag: SAWIRRO
Ciidamada Ciraaq iyo dowladaha uu Mareykanka kow ka yahay ee taageeraya ayaa dhawaan duullan dhinacyo badan waxa ay ku qaadeen caasimadda labaad ee dalka Ciraaq ee Mosul halkaas oo ay haytaan kooxda ISIS. Hadaba magaalooyin laga saaray ISIS ayaa waxaa laga helay tunelo aan horay noocooda loo arag.
by calanka —	October 28, 2016 —	Sawirro
Taleefishinka Al-jazeera oo barnaamij xiiso badan ka diyaariyay Soomaaliya: VIDEO
Barnaamijkan oo dhowr qeyb ag islamarkaata uu taleefishinkaasi qeybtiisa Al-jazeera World ku magacaabay “The Forgotten Story” ayaa waxaa uu qeybtiisa ugu horreysay ka baxay tv-ga maanta, waxaan looga hadlayaa taariikhda, dhaqanka iyo ahmiyadda gaarka ee ay Soomaaliya leedahay.
by calanka —	October 28, 2016 —	Video
Qoxooti ku haray kaamka Calais oo guryohooda xoog dab lagu qabadsiiyay: SAWIRRO
Dhowr boqol oo qof oo muhaajiriin ah ayaa weli ku harsan xerada qoxootiga ee Calais, halkaas oo ay ciidamada Fransiisku ka wadaan bur-burin. Iska hor imaad dhex maray ciidamda iyo dadkii kaamka deganaa ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin.
by calanka —	October 27, 2016 —	Sawirro
Maxaad kala socotaa kharashka UN-ka kaga baxa Soomaaliya?: VIDEO
23 hay`adood oo hoostaga Qaramada Midoobay ayaa ka howlgala gudaha Soomaaliya, waxaana dhammaan hay? adahaasi mid waliba haysaa shaqo gooni ah. Hadaba filmkan ayaan waxaan ku eegeynaa kharashka hay`adahaasi kaga baxaya gudaha Soomaaliya.
by calanka —	October 27, 2016 —	Video
Gabar ay u baxsheen “qalfoofta socota” oo astaan u noqotay abaaraha Yemen: SAWIRRO
Dalka Yemen ayaa waxaa ka taagan abaaro ba`an oo indha caalamku kasii jeedaan. Si loogu soo jeediyo indhaha caalamka ayaa waxaa dhawaan lasoo bandhigay gabar 18-jir ah oo lagu magacaabo Saida Ahmad Baghili taas oo macluul darteed loo seexshay isbitaal.